N'ogbe XJC-2F-30-H90 Muti-axis Force Sensor rụpụta na ụlọ ọrụ | XJCSENSOR
XJC-2F-30-H90 Muti-axis Force mmetụta
Ịmụta iguzogide nje ụkpụrụ, elu kpọmkwem;
Obere ngwaahịa size, wuru na-ike ampilifaya Ọ bụ ezie na elu na ala okpomọkụ ụgwọ, ezi okpomọkụ e ji mara;
Obere njehie crosstalk, nkwụsi ike ogologo oge;
Esịtidem n'ibu mgbochi bufee imewe, ike mgbochi bufee ike;
Usoro a manyere n'ụzọ abụọ.
Ike mmetụta na-eji ike chebaara mmiri, akakabarede mmiri na nhazi nkeji iji tọghata otu ma ọ bụ karịa n'ibu quantities (erughị ala, erughị ala, mgbali, ibu, ibu, torque, esịtidem nchegbu na nje, wdg) n'ime eletriki mgbaàmà mmepụta (voltaji, ugbu a, ụgbọ ala, wdg) ).) Ngwaọrụ.
Mmepe nke ihe mmetụta dị ike gụnyere njikọta nke usoro ọrụ nke igwe, igwe, ihe, metrology, wdg, yana nnukwu ihe mgbochi
Enwere ike ikewa ngwaahịa ndị nwere ọtụtụ axis n'ime ike axis abụọ, ike axis atọ, ike axis anọ, na ike axis ise dịka ọnụọgụ axes ndị atụ.
Dika usoro ngbanwe, enwere ike kewaa ya na nhazi mmeghari na ihe ntinye matrik.
N'iji ụkpụrụ nke ụdị nje na-eguzogide, ọ nwere uru nke oke ziri ezi, akara ngosi mgbaàmà dị elu, njirimara dị elu dị elu ma dị ala, njigide dị elu, nkwụsi ike siri ike, na nhazi nha dịgasị iche. Sensor dị n'ime nwere ihe mgbochi mgbochi buru ibu, ikike mgbochi buru ibu, yana enwere ike ịgbakwunye Amplifier, akara ngosipụta nwere ọtụtụ ụdị maka nhọrọ. .
Ejirila nke kachasị sayensị na nyocha: Ahụ ihe mmetụta (ahụ na-agbanwe agbanwe) ejirila nke sayensị wee nyochaa ọtụtụ oge site na iji supercomputers na sọftụwia azụmahịa dị ike, kama ịmebe dabere na ahụmịhe onye ahụ.
Nnukwu ihe mmetụta ziri ezi: Ọ na-edozi nsogbu njikọta ọtụtụ akụkụ site na ngwaike (usoro ahụ dị mma na nghọpụta ihe nlele) na sọftụwia (ihe ngosi mgbapụta na-ewepụta algorithm). Melite ziri ezi nke dị iche iche sensọ.
Obere obere: Ihe ka ọtụtụ n’ihe ndị na-ewu ewu na ahịa bụ ihe mmetụta buru ibu, nke dị mfe ịmepụta. Nnukwu ihe mmetụta ga-emetụta oke nha n'ihi oke ibu na aka ha. Mmepụta nke ihe mmetụta dị ntakịrị ga-edozi ọtụtụ nsogbu, dịka nhazi ahụ, ntinye ihe mmetụta, nhazi ụzọ nlele, ihe nlele, na ihe ndị ọzọ.
Performancerụ ọrụ siri ike dịwanye mma: gụnyere obosara nke oge nzaghachi na ọsọ ọsọ, ihe mmetụta nwere arụmọrụ na arụmọrụ siri ike, yana arụmọrụ dị ike dị mkpa karịsịa maka nha ezi nke ihe mmetụta. N'oge gara aga, ọtụtụ sensọ ka na-elekwasị anya na arụmọrụ arụmọrụ, ọ dịkwa obere nyocha na arụmọrụ ike. Ngwaahịa a na - eme ka arụmọrụ elastomer mmetụta dị ike / na - agbanwe agbanwe.
Nke gara aga: XJC-6F-D65-H24 Muti-axis Force Sensọ
Osote: XJC-2F-D72-H17.5 Muti-axis Force Sensọ
XJC-6F-D65-H24 Muti-axis Force Sensọ
XJC-2F-D72-H17.5 Muti-axis Force Sensọ
XJC-3F-F39-B Muti-axis Force mmetụta